Otu esi eme ya - Ikkaro
Otu esi eme ya
Nchịkọta ngalaba nke vidiyo na usoro nrụpụta nke ihe dị iche iche.
N'ezie ị hụla ụfọdụ n'ime
Etu esi eme akwụkwọ ego Australia
Chaị. Ọstrelia na-eji akwụkwọ ego plastik nwere ike ide mmiri ma bụrụ nke a na-enweghị ike ịgbagha. Na mgbakwunye na ime ka adịgboroja sie ike. Ị nwere ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme oche oche
Ezigbo otu esi eme ya, anyị edebeghi nke ọ bụla ogologo oge. Enweghị ụda ma ị nwere ike ịhụ ihe niile ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme bọọlụ bọọlụ nke iko mba ụwa nke 2018, 2014 na 2010
N'arịrịọ enyi m Edgardo Confessore na facebook (a mgbape nke boomerangs) M na-ahapụrụ gị ụfọdụ vidiyo na obere ozi gbasara kedu ka esi eme bọọlụ bọọlụ iko mba ụwa.
Bọọlụ World Cup nke South Africa maka 2010 FIFA World Cup, aha ya Adidas jabulani. Mere Adidas ma hazie ya ma mekwaa na Mahadum Loughborough, na United Kingdom. Okwu ahụ Jabulani pụtara in Zulu: eme ememe
Bọọlụ nwere 8 ogwe ọkụ nwere njikọta atọ, nke sitere na ethylene-vinyl acetate (EVA) na polyurethanes thermoplastic (TPU) iji mee bọọlụ zuru oke.
Etu esi eme aja
Na-achọ ịmata etu esi emepụta ihe na ihe? Lelee anya Otu esi eme ya
Taa, anyị wetara otu esi akpụ akpụ.
A na-emeghe akwụkwọ mpịakọta buru ibu, a gafere ya site na onye nbipute nke na-ebipụta n'otu akụkụ granulate nke ájá ájá ga-enwe, dịka ọmụmaatụ P80
Na mpịakọta ọzọ, a na-etinye gluu n'akụkụ nke a na-ebipụtaghị. Iji dọta ọka (kristal) na akwụkwọ glued, a na-ebu ya ọkụ eletrik ma na-adọta ha nke mere na ọtụtụ na-arapara na gluu.
Otu esi eme ụta
Ahụrụ m ụta n'anya. Enwekwara m otu n’ime decathlon, nke m ji anụrị ezigbo oge. Mana… Nọgidenụ na-agụ ihe
Etu esi eme bọọlụ bọọlụ
Ụnyaahụ Otrebor jụrụ anyị na nnọkọ ahụ ajụjụ banyere -esi mee ka arụrụ n'ụlọ paintball bọọlụ. Anyị edozibeghị ajụjụ gị mana anyị nwere olile anya na post a ga-enye gị ụfọdụ echiche ma ị nwere ike ịkọrọ anyị ya
Anyị na-achọ ozi, ma na Spanish ma na Bekee, nke bụ eziokwu bụ na anyị achọpụtaghị ụlọ emezi. Bọọlụ ndị a dị mgbagwoju anya karịa ka ha dị ka ihe kacha mkpa.
na bọọlụ Emere ha na ihe eji emebi emebi na ihe oriri, anyị nwere ike iri ha ma ọ nweghị ihe ga-eme anyị.
A na - eji capsule mee gelatin na nchikota nke ihe oriri ndi ozo, ihe nzuzo. N'ime ya na agba agba nri na polyethylene glycol, jiri mee syrups.
Kedu ka esi eme ogwu hypodermic
Igwe agịga ahụ bụ otu n'ime ihe ndị ahụ gbanwere ahụike wee mee ka ndụ anyị ka mma. Ihe… Nọgidenụ na-agụ ihe
Etu esi eme tubes fluorescent
Vidio na-esonụ banyere usoro mmepụta nke ọkụ ọkụ bụ nke kachasị amasị m ruo ... Nọgidenụ na-agụ ihe
Otu esi eme mkpuru nkpuru
Ọtụtụ n'ime unu ga-eche etu esi kpụọ na akụ, ma ọ bara uru ịhụ ka ọ dị ndụ. Ndi… Nọgidenụ na-agụ ihe
Kedu ka esi agbụ ígwè
Otu esi eme ya. Mụ na canic bụ otu n’ime ajụjụ m jụrụ onwe m ugboro ugboro. Emela … Nọgidenụ na-agụ ihe